YEYINTNGE(CANADA): Monday, June 09
of Burmaနှင့်Canadian friend of Burma)တို့၏အရေးဆိုမှုများကြောင့်မြန်မာလူမျိုးများဝင်ခွင့်ရရှိရေး
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/09/20080အကြံပြုခြင်း
နိုင်ငံတကာအကူအညီ ကုမ္ပဏီများ အမြတ်ထုတ်
NEJ/ ၉ ဇွန် ၂၀၀၈
မြန်မာနိုင်ငံ နာဂစ်လေဘေးအတွက် နိုင်ငံတကာက ပေးသည့် အကူအညီပစ္စည်းများကို ၎င်းတို့ ပေးသကဲ့သို့ ပြည်သူများ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် ကုမ္ပဏီအချို့က အမြတ်ထုတ်နေကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်းဘက်သို့ သွားရောက်အကူအညီပေးနေသည့် ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်များက ပြောသည်။ပုဂ္ဂလိက အကူအညီပေးသူတဦးက “ကျနော်တို့အဖွဲ့တွေ ဘိုကလေးမြို့ကနေ စက်လှေတွေနဲ့ တဆင့် ထပ်သွားရတဲ့ ကဒုံကနိ၊ ကွင်းပုန်းကျေးရွာ စတဲ့ ရွာတွေကို ရောက်တယ်။ အဲဒီမှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Rotary Club က လှူထားတဲ့ Shelter Box နဲ့ ရွက်ဖျင်တဲတွေ တွေ့ရတယ်။ အဲဒီ ရွက်ဖျင်တဲ အားလုံးအပေါ်မှာ H ဆိုတဲ့ ထူးထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်တွေ ကပ်ထားတယ်။ မသိရင် ဒါတွေဟာ ထူးကုမ္ပဏီက လှူတာတွေလို့ ပြည်သူတွေ ထင်သွားမယ်” ဟု ပြောသည်။
ကုလသမဂ္ဂ ကယ်ဆယ်ရေး ရဟတ်ယာဉ် ၁၀ စင်းလုံး မြန်မာပြည် ရောက်တော့မည်
WFP ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့အနေနဲ့ အသုံးပြုဖို့ မြန်မာအစိုးရက ခွင့်ပြုထားခဲ့တဲ့ ရဟတ်ယာဉ် ၁၀ စင်းအနက် နောက်ဆုံးကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ရဟတ်ယာဉ်၎ စင်းဟာ မနက်ဖြန်မှာ ရန်ကုန်မြို့ဆီ ပျံသန်းကြလိမ့်မယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ
တာဝန်ရှိသူက ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။ ဒီရဟတ်ယာဉ် ၄ စင်းရောက်သွားပြီးရင်တော့ မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက် WFP ရဲ့ အကူအညီပေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြုဖို့ စုစုပေါင်း ရဟတ်ယာဉ် ၁၀ စင်း ဖြစ်သွားတော့မှာပါ။ ရဟတ်ယာဉ်တွေဟာ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို အများကြီးအထောက်အကူပြုပြီး ပိုမိုများပြားတဲ့ ဒုက္ခသည်အရေအတွက်ကိုလည်း
ကူညီနိုင်ပါတယ်လို့ တာဝန်ရှိသူက ပြောပါတယ်။ ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ ဒုက္ခသည်တွေ စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လပ်မယ့်အရေးကို WFP က စိုးရိမ်နေပြီး အနည်းဆုံးဒီနှစ်ကုန်ထိတော့ စားနပ်ရိက္ခာအထောက်အပံ့တွေ လိုအပ်နေမယ့်အကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။
အပြည့်အစုံကို ဘန်ကောက်ရောက်၊ ဗွီအိုအေ၀ိုင်းတော်သား ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာ နောက်ထပ်ကျန်နေသေးတဲ့ ရဟတ်ယာဉ် ၄ စင်း ပျံသန်းကြတော့မယ်လို့ ဗွီအိုအေကိုပြောခဲ့သူက WFP ရဲ့ ဘန်ကောက်အခြေစိုက် ဒေသဆိုင်ရာရုံးခွဲ ပြောရေး
ဆိုခွင့်ရှိသူ မစ္စတာ ပေါလ် ရစ္စလေ (Paul Risley) ပါ။ မနက်ဖြန်မှာ ရဟတ်ယာဉ်
၄ စင်းဟာ ဘန်ကောက်ကနေ ရန်ကုန်ကို ပျံသန်းကြတော့မယ့်အကြောင်း ပြောပါ
လက်ရှိရောက်နေပြီးသား ရဟတ်ယာဉ် ၆ စင်းကိုလည်း ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း
တွေမှာ အသုံးပြုနေပါပြီ။ ရဟတ်ယာဉ်တွေကြောင့် WFP ရဲ့ စားနပ်ရိက္ခာတွေကို ပိုပြီး
တော့ များများပေးပို့လာနိုင်ပါတယ်လို့လည်း ပေါလ် ရစ္စလေက ပြောပါတယ်။
“ရဟတ်ယာဉ် ၄ စင်းဟာ ဒီကနေ့မှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသက မြို့ရွာဒေသ ၁၂ ခုဆီ သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရဟတ်ယာဉ်တွေဟာ အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်ပါ
တယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့လှေတွေကို အသုံးပြုနေခဲ့ရာကနေ အခု ရဟတ်ယာဉ်တွေကို အသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသက ကျေးရွာတွေဆီ စားနပ်ရိက္ခာတွေနဲ့ တခြားအကူအညီတွေ ပေးပို့နိုင်စွမ်း တိုးလာပါတယ်။” လို့ ပြောပါ
ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ပြီး လယ်ယာမြေတွေ ပျက်စီးခဲ့ရတာကြောင့်
ဒီနှစ်မိုးရာသီ စပါးစိုက်ပျိုးရေး ထိခိုက်ရပြီး ဧရာဝတီတိုင်းကလူထု စားနပ်ရိက္ခာ
ပြတ်လပ်မယ့်အရေး စိုးရိမ်ဖွယ် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီလူတွေအတွက် စားနပ်ရိက္ခာတွေ
ဆက်ပြီးလိုအပ်နေဦးမှာပါလို့ ပေါလ် ရစ္စလေက ပြောပါတယ်။
“ရေရှည်အနေနဲ့ဆိုရင် ဒီတနှစ်လုံးလို မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စားနပ်ရိက္ခာအထောက်အပံ့ အကြီးအကျယ် လိုအပ်နေသေးတဲ့အပေါ် ကျနော်တို့ အတော့်ကိုစိုးရိမ်မိပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီနှစ်စပါးစိုက်ပျိုးရေးက မုန်တိုင်းကြောင့် ဆိုးဆိုးရွားရွား
ပျက်စီးခဲ့ရပြီး လယ်သမားအများအပြားအတွက် ဒီနှစ်မှာ စပါးစိုက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါ
ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီဒေသမှာ လာမယ့်နှစ်အထိ စားနပ်ရိက္ခာအထောက်အပံ့တွေ
ဆက်ပေးသွားဖို့က အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။” လို့ ပြောသွားပါတယ်။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသက လယ်မြေဧကပေါင်း ၃.၂ သန်းကျော်မှာ ၆၀% လောက်
ပျက်စီးသွားပြီး ၁၆% လောက်ကတော့ ဒီနှစ်မိုးရာသီမှာ စပါးစိုက်လို့ မရလောက်တော့
အောင်ကို ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ FAO ရဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ ဒုတိယကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ
ဟိရိုယုကိ ကိုနုမ (Hiroyuki Konuma) ကလည်း ပြောထားဖူးပါတယ်။
အခုအချိန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိုးတွင်းရာသီဖြစ်ပါတယ်။ မုတ်သုန်မိုး အပြင်းအထန်
ရွာသွန်းပြီဆိုရင် လမ်းတွေရေလွှမ်းမိုး၊ ကွင်းပြင်တွေက ရွှံ့နွံတွေဖုံးလွှမ်းနဲ့ ပုံမှန်အချိန်
မှာတောင်မှ သွားရေးလာရေး ခက်ခဲရပါတယ်။ အခုလို မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ထားပြီးတဲ့
အခြေအနေမှာ မုတ်သုန်မိုးဟာ အခြေအနေကို ပိုဆိုးရွားစေတာကတော့ သံသယ
ဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ ပေါလ် ရစ္စလေကလည်း ဒီအချက်ကို ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
“အခုဟာက မုတ်သုန်ရာသီဆိုတော့ အရမ်းကိုစိုစွတ်ပြီး အရမ်း ရွှံ့နွံထူထပ်ပါတယ်။ အကြီးမားဆုံးအခက်အခဲကတော့ ရဟတ်ယာဉ်တွေ ဆင်းနိုင်လောက်အောင် ခံနိုင်
ရည်ရှိ မာကျောတဲ့မြေပြင်ကို ရှာရတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသက လူတွေ
အတွက် ကျနော်တို့ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်နေတဲ့ စားနပ်ရိက္ခာပမာဏဟာ ရဟတ်ယာဉ်
တွေကြောင့် တိုးလာမယ်ဆိုတာကို ခုချိန်ထိတော့ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ထားတုန်းပါ။ လက်တွေ့မှာလည်း ရဟတ်ယာဉ်တွေ ဒီကနေ့ရောက်ခဲ့တဲ့ မြို့တွေ ရွာတွေထဲမှာ တချို့
ရွာတွေဟာ ဒီကနေ့မှာမှ စားနပ်ရိက္ခာတွေ ပထမဆုံးရကြတာပါ။” လို့ ပြောပါတယ်။
မုန်တိုင်းကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၃၄,၀၀၀ ကျော်၊ ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၂.၄ သန်းကျော်ရှိမယ်
လို့ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေထိ ဒုက္ခသည် သန်းနဲ့ချီပြီးတော့ အကူအညီတွေ မရကြသေးပါဘူး။ ဒီလိုအကူအညီတွေ နှောင့်နှေးနေရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရက အကူအညီတွေလက်ခံဖို့ တုံ့ဆိုင်းနေခဲ့တာ၊ နိုင်ငံတကာက အကူအညီပေးမယ့် အဖွဲ့
အစည်းတွေ၊ လူတွေကို ၀င်ခွင့်မပြုဘဲ အချိန်ဆွဲထားခဲ့တာ၊ ပေးပြန်တော့လည်း ဗျူရို
ကရေစီ ကြိုးနီစနစ် အတားအဆီးတွေကြောင့် နှောင့်နှေးရတာတွေ ပါဝင်တယ်လို့
မြန်မာအာဏာပိုင်တွေဘက်ကတော့ ဒီအချက်တွေကို တောက်လျှောက်ငြင်းဆန်လာ
ခဲ့ပြီး မုန်တိုင်းသင့်ဒုက္ခသည်တွေကို အကူအညီတွေ ဘယ်လိုပေးနေတယ်ဆိုတာ နေ့စဉ်သတင်းစာတွေမှာ အကျယ်တ၀ံ့ ဖော်ပြနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကုလသမဂ္ဂနဲ့
ASEAN အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့တို့က တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ သဘောထားကွဲလွဲ
စွာ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဆင့်ပြီးသွားပြီ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဆင့် ရောက်နေ
ပြီလို့ တစိုက်မတ်မတ် ပြောဆိုနေပါတယ်။
မုန်တိုင်းသတင်းများ အကြီးအကျယ် ဖြတ်တောက်
မြန်မာပြည်တွင်း တင်သွင်းသည့် နိုင်ငံခြားထုတ် မဂ္ဂဇင်းများတွင် ပါဝင်သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်းဆိုင်ရာ သတင်းနှင့် သတင်းဆောင်းပါးများကို စာပေ စိစစ်ရေးမှ ဖြတ်တောက် ဆုတ်ဖြဲပြီးမှ ဖြန့်ချိ ရောင်းချနေကြောင်း သိရသည်။ ပြည်တွင်းသို့ တရားဝင်လမ်းကြောင်းမှ တင်သွင်း သည့် Time, News Week, The Economist မဂ္ဂဇင်းနှင့် အခြားမဂ္ဂဇင်း၊ သတင်းစာများ၌ပါဝင်သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်းဆိုင်ရာ သတင်းနှင့် သတင်းဆောင်းပါးများကို ဖြတ်တောက် ဆုတ်ဖြဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း အင်းဝစာအုပ်တိုက်မှ ပုံမှန်ဝယ်ယူ ဖတ်ရှုနေသူတဦးက ပြောသည်။၎င်းက “နမူနာ ဆိုပါတော့ဗျာ။ မေလ (၁၀-၁၆) ရက်အတွက် ထုတ်တဲ့ အီကောနောမစ် မဂ္ဂဇင်း ဆိုရင် Myanmar's misery ခေါင်းစဉ် ဧရာဝတီ တိုင်းက ရေလွှမ်းနေတဲ့ ကျေးရွာမျက်နှာဖုံးနဲ့။ ဒါပေမယ့် အထဲမှာ မာတိကာ စာမျက်နှာတောင် မပါဘူး၊ ဆုတ်ထားတာ၊ စာမျက်နှာ (၁) ကနေ (၈) အထိ၊ စာမျက်နှာ (၁၀) ကနေ (၁၂) အထိ၊ စာမျက်နှာ (၃၄) ကနေ (၃၇) အထိ ဆုတ်ဖြဲထားတယ်။ စုစုပေါင်း (၁၅) မျက်နှာ ဆုတ်ဖြဲထားပြီး မြန်မာပြည်အကြောင်းဆို တစွန်းတစမှ မပါဘူး။ ကျနော်က (၃) လကို (၃၆,၀၀၀) ကျပ် ပေးပြီး ဖတ်ရတာ။ ဘယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတော့မလဲ။ အင်းဝတိုက်က ၀န်ထမ်းကို မေးတော့ စာပေစိစစ်ရေးကို တင်ပြရတယ်။ စာပေစိစစ်ရေးက ဆုတ်ဆိုတာတွေကို ဆုတ်ဖြဲပြီးမှ ဖြန့်ဝေပေးရတယ်လို့ ပြော တယ်” ဟု ဆိုသည်။
ဇွန် (၆) ရက်ထုတ် စစ်အစိုးရပိုင် သတင်းစာများ၌လည်း မသမာသူများသည် ဧရာဝတီတိုင်း၊ လပွတ္တာနှင့် ဘိုကလေးဘက်တို့ သွားရောက်ပြီး လုပ်ဇာတ်ဆင် ဗီဒီယိုများ ရိုက်ကူးကာ ပြည်ပ သတင်းဌာနများသို့ ပေးပို့ ထုတ်လွှင့်လျက် ရှိနေကြောင်း စွပ်စွဲရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ ။
မုန်တိုင်းသင့်ဦးရေ၏ (၈) ရာနှုန်းသာ နိုင်ငံတကာကြက်ခြေနီ လခြမ်းနီ အကူအညီရ
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်န၀ါရီလဆန်းပိုင်းကလည်း ဂြိုဟ်တုစလောင်း ရုပ်သံဖမ်းယူကြည့်ရှုခွင့် လိုင်စင် ကြေးကို နအဖ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ကြိုတင်အသိမပေးဘဲ တနှစ်လျှင် ကျပ် (၆) ထောင်မှ ကျပ် (၁၀) သိန်းအထိ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ။
ကျော်ထင်/ ၉ ဇွန် ၂၀၀၈
ထရပ်ကားလေမွန်းကျပ်မှုမှ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူ နောက်ဆုံးအသုတ် ကော့သောင်သို့အသွား တွေ့ရစဉ် ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ရနောင်းမှ ဖူးခက်သို့ အသွား အအေးခန်းကားပေါ်၌ မွန်းကျပ် သေဆုံးမှုမှ လွတ်မြောက်လာသူများထဲမှ နောက်ဆုံးကျန်နေသည့် (၁၀) ဦးကို ထိုင်း အာဏာပိုင်များက ယမန်နေ့က မြန်မာဘက်သို့ ပြန်လည်ပို့ပေးခဲ့သည်။
သေဆုံးသူနှင့် အသက်ရှင်သူအားလုံးတို့သည် တဦးလျှင် မော်တော်ယာဉ် အာမခံကုမ္ပဏီမှ ပေးအပ်မည့် ဘတ်ငွေ (၃) သောင်းခွဲစီ လျော်ကြေးရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အခြားနစ်နာကြေးများလည်း ရရှိမည်ဟု သိရသည်။ ။
မြ၀တီ သင်္ကန်းညီနောင်တွင် ဆွဲမိုင်းပေါက်ကွဲ
ယခုပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် နေရာဒေသတကြောတွင် ယခင်ကလည်း တိုးတက်သော ကရင်ဗုဒ္ဓ ဘာသာအဖွဲ့ (DKBA) ၏ အဖွဲ့ပိုင်ကားများ မကြာခဏ ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရသည့် နေရာဖြစ်သည်။ ။
DPA/NEJ ၉ ဇွန် ၂၀၀၈
ဂျပန်နိုင်ငံသည် မြန်မာ့လေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၉၅၀,၀၀၀) တန်ဖိုးရှိ စောင်၊ ဖျာ၊ ရွက်ဖျင်တဲ၊ ရေတိုင်ကီ၊ မီးစက် စသည့်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ လှူဒါန်း ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ။
ဒလိုင်းလားမားက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နာဂစ်
မုန်တိုင်းဒဏ် ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက် အိန္ဒိယရူပီးငွေ
၅၀၀,၀၀၀ လှူဒါန်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီအလှူငွေကို အိန္ဒိယ နိုင်ငံအခြေဆိုက် အန်စီဂျီယူဘီ ပြည်ပရောက်အစိုးရ
အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာတင့်ဆွေက
တဆင့် ဒီနေ့ ပေးအပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
သြစတေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမြို့ကို မထွက်ခွာခင်
ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားက နယူးဒေလီမြို့
Radisson Hotel မှာ အလှူငွေကို ပေးအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်း
လားမားဟာ အရင်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက မုန်တိုင်းဘေးသင့် ဒုက္ခသည်တွေ
အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့အကြောင်း အဝေးရောက်တိဘက်
“တိဘက်ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားက မြန်မာနိုင်ငံမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ် ခံရတဲ့
အချိန်မှာပဲ အိုင်စီအာစီ နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအသင်းကြီးကတဆင့် ဒေါ်လာ
၅၀,၀၀၀ ပေးလှူခဲ့တယ်လို့ ဒီနေ့ တိဘက် အဝေးရောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်က
ကျနော့်ကို ပြောပါတယ်။ အဲတော့ ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမား အခုလို ဘာကြောင့် ထပ်လှူသလဲဆိုတော့ နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေဟာ တကယ်ပဲ မြန်မာပြည်သွားပေ
မယ်လို့ အခု ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေ အပြည့်အ၀ မရောက်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေ
ကြားတဲ့အခါမှာ ဒီ ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားက ထပ်ပြီး စေတနာပေါ်လာတဲ့
အတွက် တကယ့်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေဆီ ပို့ပေးနိုင်မလား၊ ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့
ကတိစကားအရ ကျနော့်ဆီကတဆင့် လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့လှူဒါန်းမှုဟာ
စေတနာသုံးတန် ပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ လှူဒါန်းတဲ့သဘော ဖြစ်ပါတယ်။ လှူဒါန်းတဲ့နေရာမှာ
သူမေးတဲ့ မေးခွန်းသုံးခု ရှိပါတယ်။ ပထမအချက်ကတော့ မုန်တိုင်းပြီးတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေ၊ နောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာအရေးအခင်းမှာ ကွယ်လွန်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတဲ့ သံဃာတော်တွေရဲ့ အခြေ
အနေသုံးရပ်ကို သူမေးပါတယ်။ ဒီဟာကို ကျနော် ကြိုးစားပြီး ရှင်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
“ဒီအလှူဟာ ဘုန်းတော်ကြီးက လှူတာဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာပြည်ထဲကို တကယ်တမ်း ဒုက္ခရောက်နေတာကို ကိုယ်တိုင်ကူညီနေတဲ့ သံဃာတော်များလက်ထဲကတဆင့်
သံဃာတော်များကို ယုံကြည်မှု အပြည့်ထားပြီးတော့ အကူအညီပေးဖို့ ကျနော် လျှောက်ထားပေးပို့သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။”
အန်စီဂျီယူဘီ အဝေးရောက်အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီး ဒေါက်တာတင့်ဆွေက ပြောပြ
မုန်တိုင်းကြောင့် သေဆုံးသူတွေကို သင်္ဂြိုဟ်ရေး အိုင်စီအာစီ ကူညီ
မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ခဲ့ပြီးတော့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြရသူတွေရဲ့ ကျန်ရစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေ
ကို ဘယ်သူဘယ်ဝါ ခွဲခြားဖော်ထုတ်တာ၊ မြေမြှုပ်သင်္ဂြိုဟ်တာ၊ မီးသင်္ဂြိုဟ်တာတွေ
လုပ်ဆောင်ရာမှာ နိုင်ငံတကာကြက်ခြေနီကော်မတီ (ICRC) က ကူညီပံ့ပိုးပေးနေ
တယ်လို့ ICRC တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းတွေကို
ICRC က ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း
အပါအ၀င် တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကို အကြံဉာဏ်ပေးတာပဲ လုပ်နေတာပါလို့လည်း
ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဘန်ကောက်ရောက်ဝိုင်းတော်သား ကိုကျော်ကျော်သိန်း
ICRC အနေနဲ့ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ ကျန်ရစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကို လူပုဂ္ဂိုလ်ခွဲခြားဖော်ထုတ် သင်္ဂြိုဟ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ အဓိကလုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့မဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းနဲ့ တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကို လိုအပ်တဲ့အကြံဉာဏ်
တွေ ပေးအပ်တာလောက်ပဲ လုပ်နေတာပါလို့ ICRC ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မစ္စတာ ခရိတ်ဂ် စတရက် သန်းရ်န်က (Craig Strathern) က
ဗွီအိုအေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကွယ်လွန်သူတွေရဲ့ ကျန်ရစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်
တဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ ICRC က ကိုယ်ထိလက်ရောက် လုပ်ဆောင်နေတာ ဘာမှမရှိပါ
ICRC အနေနဲ့ လက်ရှိမှာလုပ်နေတာက ကမ္ဘာတ၀ှမ်းရခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေပေါ်
အခြေခံပြီး ကျွမ်းကျင်မှုအကြံဉာဏ်တွေ ပေးနေတာပါပဲလို့ ပြောပါတယ်။
“အရင်ဆုံး မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း၊ တခြားအဖွဲ့အစည်းအချို့နဲ့ မြန်မာအာဏာ
ပိုင်တွေကို ကျန်ရစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ဆောင်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့
ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံတွေကို ကမ်းလှမ်းခဲ့တာပါပဲ။” လို့ ပြောပါတယ်။
တကယ်ကတော့ ICRC နဲ့ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေအကြား ဆက်ဆံရေးက သိပ်ကောင်း ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ICRC အနေနဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေဆီသွားပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားတွေနဲ့တွေ့ဆုံတာ၊ အကျဉ်းထောင်အခြေအနေ စောင့်ကြည့်တာတွေကို မြန်မာ အာဏာပိုင်တွေက ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ICRC ရုံးခွဲအတော်များများလည်း
အပိတ်ခံခဲ့ရပြီး လုပ်ငန်းတွေ လျှော့ချခံခဲ့ရပါတယ်။ ဆိုတော့ အခုရော အိုင်စီအာရ်စီနဲ့ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကြား ဆက်ဆံရေးက ဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။
“မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးနောက်ပိုင်း လုပ်ငန်းတွေမှာ အိုင်စီအာရ်စီရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက
သေးငယ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တွေကိစ္စမှာ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းကို အကြံ
ဉာဏ် ပေးတာအပြင် တကွဲတပြားဖြစ်သွားတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ ပြန်ပြီး အဆက်
အသွယ်ရနိုင်ရေး လုပ်ဆောင်မှုတွေမှာလည်း ကူညီနေပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေ
အားလုံးအတွက် ကျနော်တို့ဟာ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပါတယ်။ ဒီလို အကူအညီမျိုးတွေအတွက် ခုချိန်ထိ ကျနော်တို့နဲ့ အာဏာပိုင်တွေကြား ပြဿနာမရှိ
သေးပါဘူး။” လို့ ခရိတ်ဂ်က ပြောပါတယ်။
ဒါဆိုရင် အိုင်စီအာရ်စီရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ ဘေးကနေ အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ အခန်း ကဏ္ဍသက်သက်ပဲလားဆိုတော့ ခရိတ်ဂ်က သဘောတူပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီလိုမျိုး
ဘေးကနေ အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ ဘယ်လောက်အရေးပါပါသလဲ
ဆိုတော့ ဒီအဆင့်မှာ ဒါကိုပြောဖို့ နည်းနည်းတော့ခက်ပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် မိသားစု
၀င်တွေအချင်းချင်း အဆက်အသွယ်ပြန်ရဖို့ လုပ်နေတာမှာကတော့ တိုးတက်မှုတွေ
“သူတို့ အသက်ရှင်ပြီး ကောင်းကောင်းရှိနေတယ်ဆိုတာကို မိသားစု ဆွေမျိုးသားချင်း
တွေဆီ အသိပေးချင်တဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် မိသားစုဝင်တဦးဦးရဲ့သတင်းကို သိချင်သူတွေရဲ့ သတင်းစကားတွေကို စုဆောင်းလာတာ ၄၀၀ လောက်ရှိလာပါပြီ။ ဒီလုပ်ငန်း
အကြောင်းကို လူတွေပိုပြီး သတိထားမိလာရင် တောင်းဆိုမှုကလည်း ပိုများလာဖွယ်ရာ
ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းကို ထူထောင်တာ၊ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းကို အကြံဉာဏ်ပေးတာတွေဟာ တန်ဖိုးရှိပါတယ်။” လို့ ပြောသွားပါတယ်။
ဂြိုဟ်တုစလောင်း အရောင်းဆိုင်များကို ရှာဖွေဖမ်းဆီး
မိုးအောင်တင်/ရန်ကုန် ဇွန် ၉၊ ၂၀၀၈
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဂြိုဟ်တုစလောင်းပစ္စည်း ရောင်းချသည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်များကို ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရဲများက ၀င်ရောက်ရှာဖွေပြီး စလောင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းသွားခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းအပြီး ရန်ကုန်မြို့လယ်မှ ဂြိုဟ်တုစလောင်းများ (ဓာတ်ပုံ - မိုးအောင်တင်)
စလောင်းလိုက်လံ တပ်ဆင်သူကိုရဲလွင်က“သောကြာနေ့ ညနေပိုင်းက ဆိုင်တွေကို ၀င်ပြီး စလောင်းပစ္စည်းတွေ သိမ်းတယ်။ ရောင်းတာတွေ့ရင် ထောင်ဒဏ် ၃နှစ်ချမယ်လို့ပြောသွားတယ်။ မုန်တိုင်းတုန်းက ရန်ကုန်မြို့မှာ ရှိတဲ့ စလောင်းတွေရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပျက်စီးသွားတာ။ အခု ပြန်ပြင်နိုင်တဲ့သူတွေ ပြန်ပြင်ကြတုန်း ပစ္စည်းတွေ ၀င်ဖမ်းတာပဲ” ဟုပြောသည်။
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး စသည့်မြို့ကြီးများတွင် အဓိက လိုက်လံ သိမ်းဆည်းခြင်း ဖြစ်ပြီး နယ်မြို့ငယ်များတွင်မူ သိမ်းဆည်းရန် လာရောက်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးကြောင်း သန်လျင်မြို့နေ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တဦးကပြောသည်။
ရန်ကုန်အခြေစိုက် သတင်းထောက်တဦးကလည်း “စလောင်းဆိုင်တွေမှာသွားမေးရင် ပစ္စည်းပြတ်နေတယ်ပဲ ပြောကြတယ်။ ဆင်တဲ့သူကနေ တဆင့်ဝယ်မှ ရောင်းတယ်။ အဲဒါလည်း ဆိုင်နဲ့သိတဲ့ ဖောက်သည်မှ ရောင်းရဲတာ” ဟု ပြောသည်။
ဂြိုဟ်တုစလောင်းမှ နေ့စဉ် ထုတ်လွှင့်လျက်ရှိသည့် နော်ဝေအခြေစိုက် ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ (ဒီဗီဘီ) ၏ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ် အပါအဝင် အယ်လ်ဂျားဇီးယား၊ စီအန်အန် စသည့် သတင်းအစီအစဉ်များတွင် ပြသနေသော မြန်မာပြည်နှင့် ပတ်သက်သည့် အခြေအနေမှန်များကို ပိတ်ဆို့လိုသဖြင့် စလောင်းပစ္စည်းများကို ဖမ်းဆီးခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံ များကပြောဆိုသည်။
ဇွန်လ ၆ရက်နေ့ထုတ် အစိုးရသတင်းစာ နောက်ကျောဖုံးတွင် ဧရာဝတီတိုင်း လေဘေးဒဏ်ခံရသည့် လပွတ္တာ ဘိုကလေး စသည့် မြို့နယ်များမှ အဖြစ်အပျက်များကို ဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီး ပြည်ပသတင်းဌာနများသို့ ရောင်းစား ကိုယ်ကျိုးရှာနေသူများ ရှိကြောင်းနှင့် ထိုသူများကို အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ရှောင်ရှားကြပါရန် ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်န၀ါရီလဆန်း ၁ရက်နေ့တွင်လည်း ဂြိုဟ်တု စလောင်း လိုင်စင်သက်တမ်းလဲလှယ်မည့်သူများအား နှစ်စဉ်ကြေး ကို ၁၂၀၀၀ ကျပ်မှ ၁၀သိန်းကျပ် အသစ်လုပ်ဆောင်မည့်သူများအနေဖြင့် ကျပ်သိန်း ၂၀ သို့ တိုးမြှင့်သည့် ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး စလောင်းသုံးစွဲသူများအကြား ကြီးမားသည့် ဂယက်ရိုက်ခတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် သီတင်းပတ် ၂ ပတ်ကျော် အကြာတွင်အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်ကို ဆိုင်းငံ့ထားပြီး ဘဏ္ဍာရေး နှစ်ကုန်သည့် မတ်လ ၃၁ရက်ထိ မည်သည့်ညွှန်ကြားချက် အသစ်မှ ထပ်မံ မထွက်ပေါ်ခဲ့ပေ။
သေဆုံးသူများ၏ အလောင်းများ တလကျော်ကြာသည်ထိ သိမ်းဆည်းသူမရှိသေး
အမှောင်ကို ထွန်းညှိနေတဲ့ မီးအိမ်ရှင်များ …
စိုးအောင်ဆန်း ဇွန် ၉၊ ၂၀၀၈
ဒီနေ့ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ တာဝန်မဲ့ပြီး စိတ်စေတနာ ညံ့ဖျင်းတဲ့ အစိုးရ တရပ် အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အမှောင်ခေတ်ထဲ ကနေ အခက်အခဲ ဒုက္ခမျိုးစုံကို ထပ်ဆင့် ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။
Handy Myanmar Youths အဖွဲ့က လေဘေးဒုက္ခသည်တွေ အတွက် ဝါးနဲ့ တာပေါ်လင် သုံး ဘတ်ဂျက်တဲ ဆောက်လုပ် နေကြစဉ်
ဒီအချိန်မျိုးမှာပဲ ပြည်သူထဲက ပြည်သူ အချင်းချင်း စာနာညှာတာစိတ်နဲ့ အပြန်အလှန် ရိုင်းပင်းကူညီရင်း ရှင်သန် နေကြရတာကို တွေ့မြင်နေရမှာပါ။
ဒီလို စာနာ ကူညီနေသူတွေဟာ အမှောင်ကို ထွန်းညှိနေ တဲ့ မီးအိမ်တွေပဲ မဟုတ်ပါလား…။
အဲဒီ အမှောင်ကိုထွန်းညှိ နေတဲ့ မီးအိမ်တွေထဲက Handy Myanmar Youths ဆိုတဲ့ မီးအိမ်တလုံး ထပ်မံ ထွန်းလင်းလို့ လာခဲ့ပါတယ်။
ကိုညီလင်းဆက်ဆိုတဲ့ မီးအိမ်ရှင်တဦးက နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်း တိုက်ခတ်ပြီးလို့ တပတ်ခန့်အကြာမှာ လေဘေး ဒုက္ခသည်တွေရှိတဲ့နေရာတွေကို သွားရောက် ခဲ့ရင်း သူ့ရင်ထဲမှာ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် အလင်းတန်း လေးတခု လင်းလက်လာခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီ အလင်းတန်းကတော့ နာဂစ် ဒုက္ခသည်တွေတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲထဲက နေရေး ကိစ္စ အကူအညီပေးရေးပါပဲ…။
ဒုက္ခသည်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ရှေ့ဆက်ရမယ့် ခရီးအတွက် နေရေးအခက်အခဲတွေကို ပြောပြလာရာက သူတို့ အတွက် ဘတ်ဂျက်တဲ စီမံကိန်း ဖြစ်ပေါ်လာရတာပါလို့ ကိုညီလင်းဆက်က ပြောပြပါတယ်။
“ကျနော်တို့ စပြီး စိတ်ကူးရတာက ကျနော်တို့ ပစ္စည်းလေးတွေ သွားဝယ်ရင်းက၊ ကျနော်တို့ ဟိုး ရွာတွေထဲ အထိ ဆင်းတဲ့ အခါမှာ ဒုက္ခသည်က ၂ မျိုးတွေ့ရတယ်၊ တချို့က မြို့ပေါ်ရောက်သွားတယ်၊ တချို့က မုန်းတိုင်းစဖြစ် ကတည်းက နေရာ မှာပဲ၊ လုံးဝ မြို့ပေါ်မတက်ဘူး၊ သူတို့က လယ်ပြန်လုပ်ချင်တယ်၊ သူတို့ အဖြစ်တွေကိုလည်း အလုပ်ထဲမှာ မြုပ်ထားရင်း မေ့ပစ်ချင်တယ်ပေါ့၊ သူတို့မှာ နေစရာက မရှိဘူး၊ နေစရာရှိရင် သူတို့ လယ်ပြန်လုပ် ချင်တယ်ဆိုပြီးပြောပြတယ်”လို့ ကိုညီလင်းဆက်က ပြောပါတယ်။
အဲဒီ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ နေရေးကို ကူနိုင်ဖို့အတွက် ကိုညီလင်းဆက်နဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ စုစည်းမိကြပြီး Handy Myanmar Youths ဆိုတဲ့ အစုအဖွဲ့လေးတစု ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Handy Myanmar Youths အဖွဲ့က အင်အားမများပေမယ့် အင်ဂျင်နီယာ၊ ဘလော့ဂါနဲ့ နိုင်ငံခြား သဘောင်္သား စတဲ့ အားလုံး ဟာ ခေတ်ပညာတတ် လူငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
၅ ဦးခန့်ရှိတဲ့ သူတို့အဖွဲ့မှာ ကိုညီလင်းဆက်ကတော့ ဘလော့ဂါ တဦးဖြစ်ပြီး အခု ဘတ်ဂျက်တဲ စီမံကိန်း ရဲ့ ဦးဆောင် သူတဦးလည်းဖြစ်၊ တဲပုံစံ ထုတ်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ဒီစီံမံကိန်း အတွက် သူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ အိုင်တီ ကုမ္ပဏီ တခုမှ အလုပ်ထွက်ပြီး မြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘတ်ဂျက်တဲပုံစံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး“တဲပုံစံက ကျနော် ဒီဇိုင်းဆွဲတာပါ၊ မော်လမြိုင် ခေါင်ချိုး လို့ခေါ်ပါတယ်၊ အဲဒီလိုမှ ပုံစံ လုပ်မပေးရင် သူတို့က ပုံစံ အမျိုးမျိုးလုပ်ကြမှာဆိုတော့ ကျနော်တို့က တယောက်ချင်းဆီကို လိုက်ပြီးတော့ ခွဲပြီးပေးလို့ မရဘူး”လို့ ကိုညီလင်းဆက်က ပြောပြပါတယ်။
Handy Myanmar Youths အဖွဲ့ဟာ လပွတ္တာ အောက်ဘက်ရှိ ရွာတွေကနေ သူတို့ စီမံကိန်းကို စတင်အကောင် အထည် ဖော်ခဲ့တာ အခုဆို လူ ၃ ဦးလောက် နေလို့ရတဲ့ အိမ်လုံးချင်း နဲ့ လူ ၁၀ ဦးကနေ ၁၅ ဦးခန့် နေ လို့ရတဲ့ စုပေါင်းအိမ်တွေကို တရွာမှာ အလုံး ၃၀ ကျော် ၄၀ နီးပါးအရေအတွက်ရှိတဲ့ ရွာပေါင်း ၅ ရွာ တပြိုင်တည်း ဆောက်လုပ်ပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တာပေါ်လင် မိုးထားသည့် ဘတ်ဂျက်တဲ တခု
“ကျနော်တို့က ဘတ်ဂျက်က နည်းတော့ ဘတ်ဂျက်ထဲ ဝင်အောင်ဆောက်ရတာ၊ တချို့ရွာတွေဆိုရင်၊ ကုက္ကိုရွာ ဆိုရင် မိသားတစု အိမ်တလုံးပေါ့ ၊ တချို့ရွာတွေကျ မိသားစု တစုချင်းစီလိုက် ပြန်မဆောက်ပေးနိုင်ဘူး၊ သူတို့ကို ကျတော့ စုပေါင်းအိမ်တွေ ဆောက်ပေးထား တယ်၊ အိမ်တလုံးကို ဆောက်တာ တပတ် လောက်တော့ ကြာတယ်၊ အနည်းဆုံး ၁၀ ယောက်နဲ့ အများဆုံး ၁၅ ယောက်လောက် နေနိုင်တဲ့အိမ်က ၁၂ ပေ x ၁၈ ပေ အကျယ်၊ အမိုး အစွန်း အထွက်တွေ မပါ၊ မိသားစု လိုက်တွေ ဆောက်ပေးတဲ့ အိမ်က ၁၀ ပေ x ၁၂ ပေ အကျယ်ရှိတယ်”လို့ ကိုညီလင်းဆက်က ပြောပြ ပါတယ်။
Handy Myanmar Youths အဖွဲ့အနေနဲ့ ဘတ်ဂျက်တဲ တွေကို လပွတ္တာ မြို့နယ်ထဲက ကုက္ကို၊ ပြင်ကနူကုန်းရွာ (စလူဆိပ်အုပ်စု)၊ ကသင်ချောင်း၊ ကညင်တပင် ရွာ (ကညင်ကုန်းအုပ်စု)၊ ရခိုင်ကုန်းရွာ၊ သိုင်းချောင်း စတဲ့ ရွာတွေ မှာ ဆောက်လုပ်ပေးနေတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ကိုညီလင်းဆက်က လောလောဆယ် သူတို့ဆောက်လုပ်နေတဲ့ အိမ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး“ကုက္ကို က ၃၉ လုံး၊ ကညင်တပင်က ၁၈ လုံး၊ ရခိုင်ကုန်းမှာ စုပေါင်းအိမ်ရာ ဆောက်ပေးဖို့ လောလောဆယ် ပြောထားတာက ၆ လုံး၊ သူတို့က မိသားစု တစုမှာ ၁ ယောက် ၊ ၂ ယောက်ပဲ ကျန်ခဲ့တာဆိုတော့ အိမ်တလုံးစီ ဆောက်မပေးနိုင်တော့ ဘူး၊ တရွာကို အိမ် ၃၉ လုံးလောက်ပြီးတာကတော့ ၂ ရွာရှိပြီ” လို့ ပြောပါတယ်။
ဘတ်ဂျက်တဲ စီမံကိန်းအတွက် လေဘေး ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ရွာတွေကို သွားရောက်လေ့လာရာမှာ တွေ့ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲ တချို့ကိုလည်း ကိုညီလင်းဆက်က ပြောပြပါသေးတယ်။
“အခက်အခဲကတော့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပဲ၊ သူတို့က သမ္ဗန်ရော၊ လှေတွေရော တော်တော်များများ မြုပ် ကုန် ကြတယ်၊ ဈေးတွေကလည်း တက်နေတဲ့အခါကြတော့ ကျနော်တို့က လှေငှားပြီး ရွာတွေကို ဆင်းကြည့် ရတာနဲ့ တင် အကုန်အကျ အရမ်းများတယ်၊ နေဖို့ ထိုင်ဖို့ ခက်တယ်၊ အစစ အရာရာ ဈေးကကြီးနေတယ်၊ ရန်ကုန် ဈေးထက်၂ ဆ ရှိတယ်”လို့ သူက ပြောပါတယ်။
အဲဒီလို ရန်ကုန် ဈေးထက်၂ ဆခန့် ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာ ဒုက္ခသည် မိသားတစုချင်းစီ နေလို့ရတဲ့ လုံးချင်း အိမ်လေး တွေရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က တလုံးကို ကျပ် ငွေ ၁ သိန်း ခွဲ ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီး အမိုးတာပေါ်လင်၊ ကြမ်းခင်း၊ အကာ တာပေါ်လင်နဲ့ အနည်းဆုံး တနှစ် နေလို့ရအောင် ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ် လို့လည်း သိရပါတယ်။
“ကျနော်တို့က အမိုး အကာ ကြမ်းခင်း ပြီးတော့ သံ၊ ကြိုး အိမ်ဆောက် ပစ္စည်း စတာတွေကို အဲဒီမှာ ရှိတဲ့မိသားစု တစုချင်း စီအတွက် သူတို့ လိုအပ်တာတွေကို ကျနော်တို့က ပံ့ပိုးပေးပါတယ်၊ အစိုးရက ဆောက်ပေးတဲ့ ဝါးတဲက ၃ သိန်းလောက် ကျတယ်၊ ကျနော်တို့က ရွာသားတွေနဲ့သွားလုပ်တဲ့ ဘတ်ဂျက်တဲက ၁ သိန်း ခွဲ ပျမ်းမျှပေါ့” လို့ ကိုညီလင်းဆက်က ဆိုပါတယ်။
အဲဒီဘတ်ဂျက်တဲ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ အချိန်မကြံ့ကြာအောင် သူတို့ အဖွဲ့က ရွာသား တွေရဲ့ လုပ်အား အကူကိုပါ ရယူတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
“အိမ်တိုင်တွေကို သူတို့ ကိုယ်တိုင် ထောင်ခိုင်းပါတယ်၊ အမှန်တကယ်က ကျနော်တို့ သူတို့ကို အိမ်တိုင်တွေပါ ပေးဖို့ စီစဉ်ထားတာပါ၊ ဒါပေမယ့် ရွာပျက်ပြီး ကျန်ခဲ့ပေမယ့် သူတို့ ဆီမှာ ရေနစ်ပြီးကျန်ခဲ့တဲ့ နဂိုသစ်တွေ အကုန် ရှိနေတယ်၊ အဲဒီလို သူတို့ကို အိမ်တိုင်ထောင်ခိုင်းတော့ မဖြစ်မနေ မြန်မြန်ပြီးတယ်၊ ကျနော်တို့ အကုန်ပံ့ပိုးပေး တာကိုစောင့် နေတဲ့ အခါကျတော့ သူတို့ ၁၀ ရက် ၁၅ ရက် နဲ့ မပြီးဘူး”လို့လည်း ကိုညီလင်းဆက်က သူ့အတွေ့ အကြုံကို ပြောပြပါသေးတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေက ပုံမှန်အားဖြင့် သူတို့ရဲ့ ရွာဟောင်းမှာ ပြန်နေချင်ကြတယ်၊ သူတို့ မြေနေရာမှာပဲ သူတို့အိမ်လေး တွေနေရာမှာ သူတို့ ပြန်ဆောက်နေချင်ကြတယ် ဆိုပေမယ့် မိသားစု နည်းသူတွေကို စုပေါင်း အိမ်ဆောက်ပေး ဖို့သာ စီမံကြရတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
“တချို့ မိသားစုမှာ တယောက် ၂ ယောက် လောက်ပဲ ကျန်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့က တချို့ဟာတွေကို သူတို့ကို ပြောပြရတယ်၊ လေအရမ်းတိုက်တဲ့ ဘက်ဆိုပါတော့ ဒါမျိုးဆို ကျနော်တို့က လေကွယ်ရာ အရပ်မှာ ဆောက်သင့်တယ်ပေါ့၊ အဲဒီလိုပြောရင်းနဲ့ မြေပိုင်ရှင်နဲ့လည်း အဆင်ပြေတယ် ဆိုရင်၊ သူတို့ အတွက် စုပေါင်းအိမ် ဆောက်တဲ့ အခါမျိုးဆိုရင် မြေရာကို သေချာညှိနှိုင်းပြီး ကျနော်တို့ လုပ်ပေးပါတယ်”လို့ ကိုညီလင်းဆက်က ရှင်းပြ ပါတယ်။
အဲဒီ ကိုညီလင်းဆက်တို့ရဲ့Handy Myanmar Youths အဖွဲ့ဟာ ဘတ်ဂျက်တဲစီမံကိန်းကို သူတို့ ဘာသာ တနိုင် တပိုင် လုပ်ကိုင်နေရင်း အခုအခါ ပြည်တွင်းပြည်ပက ကူညီလှူဒါန်းသူတွေလည်း ပါဝင်လာပြီလို့ သိရပါတယ်။
အခုဆိုရင် မြန်မာပြည်တွင်းမှာ နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ အဖြူရောင် သက်တံ၊ Online donation စတဲ့ အဖွဲ့တွေလို တချို့ အမည်ပေးမထားတဲ့ လူမှုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တွေ များစွာပေါ်ပေါက်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်…။
ဒါဟာဖြင့် အစိုးရဆီက မရတာတွေထဲက တခုဖြစ်တဲ့ ပြည်သူကြားမှာ ထွန်းလင်းလာတဲ့ ဗြဟ္မစိုရ်တရားပဲ မဟုတ် ပါလား…။
ဒါဟာဖြင့် အမှောင်ကို ထွန်းညှိမယ့် မီးအိမ်တွေ ထွန်းလင်းလာတာပဲမဟုတ်ပါလား….။
အဲဒီလို မီးအိမ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက် ထွန်းလင်း တောက်ပနိုင်ပါစေ … ။ ။
UN helicopters reach out to cyclone-hit villages in Irrawaddy division
UN helicopters reach out to cyclone-hit villages in Irrawaddy division for the first time after initial delay in bringing them to Burma. There was only one WFP helicopter operating in Burma before the arrival of four more helicopters over the weekend. UN officials said more supplies for shelter are still needed. Meanwhile, an assessment team that comprises of experts from the UN, ASEAN and Burma has began the field trip today.U Aye Win, UN spokesperson in Rangoon, said the trip would last for about ten days.
Myanmar: progress on aid but access for internationals stillachallenge(united nation)
4 June 2008 – Aid deliveries to the victims of Cyclone Nargis have stepped up in recent days but access for international workers to the worst affected areas in Myanmar remainsachallenge, according to United Nations aid agencies.More than 1.3 million people, or about 50 per cent of the population, in the badly hit Ayeyarwady Delta area have received some kind of humanitarian assistance, but the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) said the relief operation still needs to be scaled up.
“We want better access for international aid workers, including non-governmental organizations (NGOs) and the International Red Cross Movement, both in terms of visas to get into the country, but also in terms of more consistent access to the delta areas,” OCHA spokesperson Amanda Pitt told reporters today in Bangkok.
The UN World Food Programme (WFP) says it had been able to increase supplies into the delta area recently now that it has three operating hubs in Labutta, Bogale and Pyapon.
With its partners dispatching greater numbers of small boats to deliver directly to villages, WFP has supplied 8,500 tons of food (mainly rice), enough to feed about 750,000 people.
WFP has also started operating one helicopter out of Yangon, Myanmar’s largest city, while it hopes to have nine additional helicopters ready in Bangkok by the end of the week.
Despite the progress, WFP spokesperson Paul Risley said that access for international staff in the Delta area “remainsachallenge.”
Meanwhile, the UN Children’s Fund (UNICEF) said that Monday was the first day back at school for children in the cyclone-affected area, though eight townships had not reopened schools as yet.
Spokesperson Michael Bociurkiw said that about 1,200 schools were completely destroyed, 800 were severely damaged and almost 2,000 had lost their roofs.
“The best way we can put it is that this was reallyachildren’s catastrophe in terms of the damage to infrastructure that kids access – we are talking about schools, health clinics and play areas,” he said, adding that UNICEF has been moving quickly to rehabilitate school buildings.
The UN Development Programme (UNDP) announcedasix-month early recovery package aimed at supporting about 100,000 survivors of the cyclone, through cash grants and cash-for-work projects.
The scheme aims to assist landless, poor people who depend on seasonal jobs. The cash-for-work initiatives will be used to clear and renovate villages as well as to help farmers plant crops or set-up small businesses.
The UN Food and Agriculture Organization (FAO) says there is an urgent need to help farmers sow rice seedlings by the end of July at the latest to avoid further serious economic impact on rural areas and the country asawhole.
FAO has carried out an assessment of agriculture in the affected areas over the past month. Preliminary results indicate that about 60 per cent of the paddy fields in the delta have been affected by the cyclone and that 16 per cent of the area has been seriously damaged because of high salinity or flooding with dirty water.
FAO spokesperson Hiroyuki Konuma said that most of the area can be cultivated for rice, but he cautioned that there are still many obstacles before rice cultivation can begin.
“In some areas farmers have returned and have started some cultivation, but many areas are still empty and farmers have not yet come back because ofalack of shelter or lack of food,” he said.
He added that seeds would need to be provided by external sources, since the majority were washed away, lost or damaged. In addition about 20 per cent of draft animals, particularly oxen and water buffaloes, had died.
Mr. Konuma said that FAO had already started buying seeds, fertilizer and agricultural tools.
New York, 27 May 2008 - Secretary-General's statement on Myanmar.
I regret the decision of the Government of Myanmar to extend forasixth consecutive year the detention under house arrest of Daw Aung San Suu Kyi, the General Secretary of the National League for Democracy (NLD). The sooner restrictions on Daw Aung San Suu Kyi and other political figures are lifted, the sooner Myanmar will be able to move towards inclusive national reconciliation, the restoration of democracy and full respect for human rights. In this regard, I expect my Special Adviser, Ibrahim Gambari, to continue on my behalf the process of political dialogue that he has begun with both the Myanmar authorities and Daw Aung San Suu Kyi in the context of his good offices mandate.
New York, 27 May 2008 - Secretary-General's press encounter on return from his trip to Thailand, Myanmar and China
SG: Good afternoon ladies and gentlemen. It isapleasure to see you again.
I have come back fromahumanitarian mission with two distressing but encouraging visits, one to the displaced victims of cyclone Nargis in Myanmar and one to earthquake-stricken China, witnessing with sadness two terrible tragedies.
Before I say more about my trip, let me briefly makeastatement:
My visit this time in Myanmar was to address the aftermath of cyclone Nargis while almost two million human lives are still at stake. I went there withamessage of solidarity and hope, telling the survivors that “the world is with you and the world is ready to help you.” I extended my heartfelt condolences to the people, of Myanmar and of China, expressing my admiration for the courage and resilience of the survivors and all those trying to help them.
Flying over the Ayeyarwady delta, I saw first hand the effects of Cyclone Nargis. In China I visited the town of Ying Xu in the District of Chendgu, at the epicenter of the earthquake. The United Nations must work together with other Member States of the United Nations, to bring help and support to the people of both countries.
Few countries possess the capacity and resources to cope on their own with disasters of this magnitude. That is why we convened the international pledging conference. Under difficult conditions, the Government of Myanmar and the people of Myanmar have put togetherafunctioning relief programme, together with the international community including ASEAN, that has taken the lead in our relief efforts. But much, much more needs to be done.
We have seen an outpouring of sympathy and support from the international community. In Thailand, Prime Minister Samak Sundaravej launched the Don Muang airport logistical base for help for Myanmar and planeloads of relief items have already been flown to Yangon. The government of Canada and others have agreed to transport the helicopters to be used in Myanmar. I am sure that my Humanitarian Aid coordinator, Mr. John Holmes, has given you the details of what is being put into place for the relief efforts needed in the next6months, and to help the Myanmar people in rehabilitating and reconstructing their country.
I have been much encouraged by my discussions with Myanmar's authorities in recent days. Senior General Than Shwe agreed to allow all international aid workers to operate freely and without hindrance. We agreed to establish several forward logistics hubs and to open new air, sea and road links to the most affected areas.
The Myanmar government appears to be moving toward the right direction, to implement these accords. Some international aid workers and NGOs have already gone into the regions of the Ayeyarwady delta, without any problem. I hope – and I believe – that this marksanew spirit of cooperation and partnership between Myanmar and the international community asawhole.
Prompt and full implementation will be the key. I will be fully, continuously and personally engaged. I look forward to returning, before too long, to see for myself the progress we have made.
Sunday's pledging conference wasagood beginning. Apart from the tens of millions of dollars pledged by the Member States, it was an important exercise towards building greater trust, confidence and cooperation between the Government of Myanmar and the international community. I sawastrong unity of purpose andasense of urgency at the meeting.
There was unanimous agreement on the need to scale up urgently and very significantly the current relief efforts. The participants also expect the Government to act in the spirit of that new agreement.
We have, here,achance foranew beginning. We should make the most of it.
I will be traveling again tomorrow to attend the first annual review of the International Compact with Iraq, which will be held in Sweden -afive-year package of economic and political reforms launched last May in Egypt. Upon return from Stockholm, I will again head to Rome this Sunday to attend the FAO summit meeting to deal with another serious issue: the global food crisis.
Thank you very much for your support, and I will be happy to answer your questions.
Q: Mr. Secretary-General, when you went to Myanmar, you went underacloud that the Myanmar government was not cooperating, and that you were going to ask them for full access and full cooperation. While you were there, did you raise the issue that you want complete and total access and cooperation from them, and while you were talking to them, did you talk to them about Aung San Suu Kyi? The statement that you just gave belies that you did not. Was there any reason that you were unable to talk to them about that?
SG: As I have made my position clear many times, my mission was to focus on humanitarian matters. I told them that this isatime we should not talk about political issues, but we must talk about humanitarian issues - saving lives - that is what I discussed with the Myanmar authorities. But in the course of our meeting, there was an opportunity of discussing these political issues, which were in fact raised first by Senior General Than Shwe. But we broadly discussed and agreed that this good offices role, mandated by the General Assembly, will have to continue, and if necessary, it should be deepened and broadened. I urged them that the seven-point democratization programme should be put into implementation as soon as possible. This is what we have discussed.
Though my last visit to Myanmar was focused on humanitarian issues, I am convinced that I will haveafurther opportunity to address these political issues at an appropriate time, and at the same time, as I said, Mr. Gambari's good offices role will continue??
Q: Mr. Secretary-General, welcome back. On Lebanon, Sir, with the appointment of the President, how hopeful are you, Sir, in the situation there, that there will be disarming of militias, and that the Tribunal will take place sooner rather than later?
SG: It was very encouraging that the Lebanese people have now electedanew President, former General [Michel] Suleimane. This is very encouraging, and about which I have already madeastatement. Taking this opportunity, I sincerely hope that the Lebanese people will revitalize all these democratic institutions which have been absent during the last almost seven months, since November last year. This isagood opportunity for them to seize. They should not lose this opportunity, while the whole international community is expressing their solidarity and support. As Secretary-General of the United Nations, as I have been deeply involved in this process, I feel very much encouraged and I will continue to work very closely with the leaders of Lebanon.
Q: Mr. Secretary-General,aquick follow up on Aung Sang Suu Kyi, in your discussion with the General, when he raised the political issue, was Aung Sang Suu Kyis' name actually raised, and is thereadate or timing that you are thinking of sending Mr. Gambari back?
And my real question is that today, Save the Children in Britain, put outareport that is quite damning about the sexual abuse and sexual exploitation of children by UN peacekeepers and NGOs. Your Spokeswoman has put outastatement in your name. I wonder if you could give your own reaction to this, and to tell us what the United Nations plans to do?
SG: First of all, on this democratization process, including the issue of Daw Aung Suu Kyi, I would not make any detailed briefings on this, because this is an issue which I have discussed with the leadership of Myanmar, and I made it quite clear to them that I was there for purely humanitarian grounds. While we hadabrief opportunity of engaging in dialogue on this issue, I told them clearly that I would try to find another opportunity, even at my level, through Mr. Gambari, to discuss all these political issues at an appropriate timing.
On your second question, these are very serious issues. I think that report is very valuable, and it does give us some good points to which the United Nations should continue to address this issue. This sexual exploitation of minors and by any aid workers or peacekeepers isavery serious issue. I have made it always clear that my policy on this sexual exploitation abuse cases is of zero tolerance. We will address this issue with the same level of emphasis. However, on all these cases which have been raised, we will very carefully investigate, and whenever there are necessary matters, we will take necessary measures on this.
Q: Mr. Secretary, it's nice to be able to askaquestion here, since our network and maybe others weren't invited by either the country or maybe the UN on your plane, so I appreciate the opportunity here. Isn't it time to say perhaps that the same diplomacy is not working in Myanmar? I mean, Aung Sung Suu Kyi is more than just one person. While there arealot of disasters going on, she isasymbol that perhaps could represent an open change by the Government, and they put her under new house arrest just days after you were there. Aren't you more upset about that? Were you used as justaphoto opportunity? And you know how Myanmar plays the game. They want to wait for world attention to go away, as it did after the monks were beaten. You are going off toafood summit; other things are going to happen. What makes you think that things have really changed with the Myanmar regime?
SG: In fact, you have eloquently stated what I feel. It is regrettable that Aung San Suu Kyi has not been released, and still has to go through this ordeal by being put under house arrest again for the sixth consecutive year. Aung San Suu Kyi's case is one of the most important and serious concerns of the whole international community, and therefore as Secretary-General, I will continue to engage myself and through Mr. Gambari to address this issue so that she and other political figures should be released as soon as possible. This is the crucial element of the democratization of Myanmar. You have my firm commitment to seeademocratized Myanmar as soon as possible.
Q: Mr. Secretary-General, on Lebanon, the issue of Hezbollah's armament during the Doha agreement, and it has to be clarified I think. Everybody is asking about this specific issue. And it seems that the use of force has been rewarded. How much are you concerned that [Security Council] Resolution 1559, 1701 and 1680 will be implemented?
SG: What is important is the spirit of the Doha agreement. With this Doha agreement, and with the election of the new President of Lebanon, I do not expect that all the pending issues in Lebanon have been resolved. There are still many more issues to be resolved, including exactly what you said - the Security Council Resolution 1559 and 1701. The United Nations, and I as Secretary-General, will continue to ensure the faithful and full implementation of those Security Council resolutions. That involves all the issues, as you mentioned - Hizbollah, and all other issues – social, political and stability issues. Therefore, I think this isanew beginning,anew opportunity for the people and government of Lebanon. They should not lose this momentum created through the Doha agreement. [About] that I am encouraged, but at the same time, we will have to continuously work together. In that regard, I urge political leaders and people, all factional leaders, to engage in inclusive dialogue for reconciliation and political and social stability.
Q: The Government of Myanmar just concludedareferendum on the constitution. My understanding is that the figure in favour is incredibly, or for some people, unreasonably high - maybe 94 percent is in favour of the constitution. So how do you assess the results of that referendum?
SG: As far as this national referendum conducted by the Myanmar authorities [is concerned] as the United Nations was not part of that process, and we did not have any observer missions during that time ofanational referendum, I am not inaposition to make any comment on this.
Q: On Lebanon, Mr. Secretary-General. The President, Mr. Suleimane, has expressed very clearly that the weapons of Hizbollah, and the resistance in Lebanon, isalegitimate one, and they should be working in concert with the Lebanese government. Would that help in expediting the liberation of Sheba'a farms and the occupied territories of Lebanon, like Ghajar and other areas?
SG: Again, I am not going to deal with any specific issues today on Lebanon. I hope there will be another opportunity of addressing this situation in Lebanon. As I said, this isanew beginning,anew opportunity. There are so many problems which we have just stated. Those are the issues to be worked out among the parties concerned, and they need the flexibility, they need some determined will to make Lebanon, through inclusive national reconciliatory dialogue, on all these issues.
Q: Mr. Secretary-General, on the day that you met Than Shwe, or the day before, it was clear that the house arrest of Aung San Suu Kyi was expired. Were you aware of it? If so, did you bring up that specific issue with him? And if not, since you are probably the only outsider who has met with him inalong, long time, why not?
SG: I was clearly aware of when this house arrest would expire, and I was concerned whether this house arrest would be extended, but for sensitive reasons, I am not going to make any further detailed comment. Believe me that I am very much committed to work very hard for the democratization of Myanmar.
Q: Thank-you Mr. Secretary-General. Some of the correspondents who were travelling with you described the camp you toured as beingashow camp and noted that the tents looked very new, some of the victims looked relatively unharmed. How representative did you feel that camp was of the overall Burmese effort?
SG: I was given free access to wherever I wanted to visit. I visited two places, and I flew over the most affected areas in the delta region, so I could see such devastating effects of Cyclone Nargis Of course, according to the regions where they had some quick relief systems working, but in other parts, places where I saw or visited, the level of damage, the level of relief operations was quite different, so I can not tell you all in one answer. But much needs to be done in Myanmar. That is why we need to work much more, much more.
Q: There are two different interpretations or readings of the latest IAEA report on Iran's nuclear enrichment programme. The first talk about violation of the concerned Security Council resolution, and the other says it shows ?.. Iran cooperating with international demands. What is your own reading of this report, Sir?
SG; I don't think that there were different reports or different readings. The report of the IAEA in the past, while they appreciated and welcomed this cooperation in implementing the work programme between IAEA and Iran was progressing, the IAEA was not quite sure about the extent of their uranium enrichment programmes. I think this report, which you mention, may refer to that particular aspect of uranium enrichment programmes of Iran. What is important is that Iran should fully comply with the relevant Security Council resolutions.
Q: There was an OpEd byaformer auditor of the Office of Internal Oversight Services [OIOS] where he said that his report on the Congo, on the trading of gold and guns by peacekeepers had been whitewashed and ignored by OIOS – it'sapretty damning report - are you aware of that, and given the issues that have arisen about OIOS, what is going to be your approach if former auditors way that their material is ignored?
SG: I think I have given my answer to this question. This has been raised several months ago, it has been [looked at again]. As I told you last time that, while we had looked at this issue very carefully and did not find much evidence to [support] that allegation. But since there are new allegations, then OIOS should look at it carefully. This is what I am going to do.
Q: What is your reaction to [the reports] that the United States is keeping about 900 children in prisons in both Iraq and Afghanistan. Are you going to ask the US officials to do something about these juveniles who are held there?
SG: For that specific question, I am not inaposition to make any comment on that.
UN helicopters reach out to cyclone-hit villages i...